Terms uye Conditions pamusoro Champions Cup Kick Off Win wedzera |
Terms uye Conditions pamusoro Champions Cup Kick Off Win wedzera
Terms uye Conditions:
Kukwidziridzwa Izvi zvichava kushingaira 11th – 17fung August 2016 (GMT).
Chete Profit uye Kurasikirwa (P&L) mumwaka kukwidziridzwa nguva iri mitambo slots achaverenga vakananga zvinodiwa kuti mune.
Ndiko kukurudzirwa vachapiwa paakavapa maererano mambure purofiti (mari chaiyo winnings) zvose mitambo slots.
Munguva chiitiko wako mambure P&L akaita dzakava kushoma pakati £ 10 winnings, muchagamuchira kwakasimukira chaizvo akaverenga panguva 20% dzenyu kwakakomba Profit vose mitambo slots.
Kuti ave kukwikwidza pamitambo Win vaonekere Promo, vatambi kunge akaita risingamboshandisi dhipozita pamusoro £ 10 panguva promotional nguva.
Maximum yose bhonasi yakawandisa £ 100.
Standard wagering zvinodiwa 30x inouya mari kushandisa pamberi bhonasi kana runoenzanirana winnings inogona kutorwa. Winnings kure bonuses vari dzavhara pana 4x inouya uwandu.
Bhonasi mari pakupfuwa kusimudzirwa ichi, anogona chete kushandiswa kutamba yedu mitambo slots.
Vatambi tinoyeuchidzwa kuti chete bhonasi anogona kuva vanoshingaira chero imwe nguva.
Standard Terms uye Conditions kushandisa.
Management mutongo wokupedzisira dzose nyaya.
Terms uye Conditions – St Patricks Day 50% Win wedzera
Terms uye Conditions pamusoro Valentines bhonasi Muruoko rwake anobata chirukiso
Terms uye Conditions pamusoro 50% Match bhonasi
Twin kuruka neChina Terms And Conditions
Terms uye zvemupiro Golden Egypt
Terms uye Conditions Of Champions Cup Win wedzera
Terms uye Conditions Yenyika Tour
Terms uye Conditions pamusoro 20% Win vaonekere Week All